Walaac iyo cabsi ku soo koradhay madaxtooyada Villa Soomaaliya kadib markii madaafiic lala beegsaday fadhiga madaweyne Yuusuf iyo taageerayaasha Col. Cabdullahi Yuusuf oo sheegay in ay arrintan u taal taageerayaasha Cali Geeddi iyo Cabdiqaasim Salaad. Ruunkinet 21/01/07
Wararka ka immaanaya madaxtooyada Villa Soomaaliya oo fadhi u ah madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in ay la soo deristay cabsi iyo walaac aad u weyn.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii fiidnimadii xalay lala beegsaday madaafiic iyo hub kale Villa Soomaaliya oo ay ku jireen madaxweynaha iyo ra'isul wasaare Geeddi.
Sidoo kale, waxaa rasaas xooggan oo isugu jirta hunka ka dhacay taangiga iyo qoryaha waaweyn soo riday ilaalada Maxweynaha oo isugu jira reer Puntland, kuwa Itoobiyaanka ah iyo taageerayaasha Prof. Geeddi Villa Soomaliya.
Rasaastan oo laga soo tuurayay madaxtooyada ayaa la sheegay in ay wax yeello u geysatay guryaha u dhow dhow goobtaasi.
Dhanka kale, taageerayaasha madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa durba billabay in ay tebiyaan in uu dagaalkaasi dhex maray taageerayaasha Dr. Cabdiqaasim Salaad iyo Prof. Geeddi ayagoo sidoo kale sheegay in laga adkaaday taageerayaasha Cabdiqaasin kadib markii ay kuwa taageersan ra'isul wasaare Geeddi ka yimaadeen dhinaca Woqooyiga Muqdisho.